Somaliland oo welwel ka muujisay Go’aanka Beesha Jaamac Siyaad, Garaadka oo ay la kulmeen saaka & Cuqaasha oo si adag u bilowday…. – Puntlandtimes
Somaliland oo welwel ka muujisay Go’aanka Beesha Jaamac Siyaad, Garaadka oo ay la kulmeen saaka & Cuqaasha oo si adag u bilowday….
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in xubnaha maamulka magaaladaas ay hadda wajaheen welwelkii ugu badnaa, ka dib markii ay ogaadeen in qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka ee magaaladu ay bilaabeen in ay abaabushaan ciidamo ay uga soo horjeeda maamulkaas.
Guddiga Nabadgalyadda ee Somaliland u qaabilsan magaalada Laascaanood ayaa welwel ka muujiyey go`aamadii shalay ka soo baxay shirka Beesha Jaamac SIyaad, waxayna sheegeen in uu ahaa mid looga soo horjeedo ammaanka magaaladas.
Xildhibaano katirsan baarlamaanka Hargeysa oo kusugan magaalada, kana soo jeeda beeshaas ayaa sheegay in ay u arkaan qaraarkaas in uu yahay mid dhabaha u xaaraya natiijo aan wanaagsaneyn.
Odayaasha iyo Cuqaasha beeshu waxay xalay go`aansadeen in gabi ahaanba ay muujiyaan in ay ka baxeen Somaliland oo ay ula mid yihiin beelaha kale ee Beel-weynta DHulbahante, waxayna sheegeen in ay ciidamadooda kala baxayaan jiidaha dagaalka.
Col, Mahad Cambaashe ayay dhalinyaradii ugu badnaa ka goosanayaan, wuxuuna bilaabay in uu hubka ka kaxareeyo maalintii, taas oo ka dambeysay shakiga uu ka qabo in ay u goosteen beelahooda oo ay ka baxaan, iyadoo 48 saac ee lasoo dhaafay ilaa 16 dhalinyarro ah ama Askari ay ka goosteen kuwaas oo reerahooda dib ula midoobay, markii ay garowsadeen waxay ku dhimanayaan.
Waxgaradka, Odayaasha & Qeybaha beesha Jaamac Siyaad oo horey loogu eedeynayay in ay lahayd masuuliyada imaanshaha Somaliland ee gobalka Sool, ayaa si cad uga soo horjeestay maamulkaas hadda, waxaana inta badan beeshan ay tahay cidda ugu badan ee dagta daafaha, gudaha iyo ahreeraha magaalada Laascaanood.